yamin oo, Author at Chelmo News Portal - Page2of 4
Home›Author: yamin oo (Page 2)
၂၀၂၀ မှာ Covid-19 ကြောင့် ရိုက်ကူးရေးတွေရပ်ထားရတာတွေလည်းရှိတော့ နှစ်သစ်မှာ ကြည့်ရမယ့် ဇာတ်ကားတွေပိုများသွားပြီနော်။ မင်မင်က ၂၀၂၁ မှာကြည့်ရမယ် K-Dramas နံမည်တွေကို တစုတစည်းတည်းတင်ပေးလိုက်တယ်နော်။ကဲ..နှစ်သစ်မှာ စိတ်သစ်လူသစ်နဲ့ K-Dramas အသစ်တွေကြည့်ကြစို့။ 1. Snowdrop ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အဓိက သရုပ်ဆောင်တွေအဖြစ် K-Drama ချစ်သူတွေနဲ့ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်တဲ့ မင်းသား ...
ဒီဇင်ဘာ ၃၀ ရက်နေ့မှာ ကျရောက်မယ့် BTS အဖွဲ့ဝင် V ရဲ့ မွေးနေ့အတွက် နိုင်ငံအသီးသီးက သူ့ရဲ့ fans တွေကတော့ မွေးနေ့မရောက်ခင်တည်းက မတူညီတဲ့ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ဂုဏ်ပြုပေးနေကြပါတယ်။ အဲ့ဒီထဲကမှ အမိုက်စားတစ်ခုကတော့ သူ့ရဲ့ Fansite တစ်ခုဖြစ်တဲ့ V_Poiter ဆိုတဲ့ Fansite ကနေ ...
ဒါကတော့ ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ ထွက်ရှိခဲ့တဲ့ မိန်းကလေးအဖွဲ့ ၁၀ ဖွဲ့ရဲ့ အယ်လ်ဘမ်ရောင်းအားအကောင်းဆုံး စာရင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ Gaon ရဲ့ဖော်ပြချက်အရ ဒီစာရင်းကတော့ ၂၀၂၀ ဇန်နဝါရီလကနေ နိုဝင်ဘာလအတွင်းမှာ ရောင်းရတဲ့ရောင်းအားကို တွက်ချက်ပြီး ဖော်ပြထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ #10 Dreamcatcher (169,925 copies) #9 ...
SBS drama ‘The Penthouse: War in Life’ ဆိုတဲ့ ဒရာမာကိုကြည့်တဲ့သူဆိုရင် သူမကို သိကြမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာဆိုရင်တော့ သူမက Joo Seokkyung ဆိုတဲ့ ဇာတ်ကောင်နေရာကနေ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒီဒရာမာရဲ့လူကြိုက်များမှုနဲ့အတူ Han Jihyun ဟာလည်း ကိုရီးယားမှာသာမက international fans တွေရဲ့အာရုံစိုက်မှုအများအပြားကိုရရှိခဲ့ပါတယ်။ ...
AiMan Index Chart ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ဒီ Ranking ကတော့ တရုတ်နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ fans တွေရဲ့ SNS mentions တွေ၊ တရုတ်နိုင်ငံအတွင်းလူကြိုက်အများဆုံးနဲ့ fans တွေရဲ့ Idols တွေအတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေ စတဲ့အဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေကိုစုစည်းပြီး ဒီစာရင်းကို ထုတ်ပြန်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီစာရင်းထဲမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ အနုပညာရှင်တွေနဲ့ သူတို့ရရှိခဲ့တဲ့ points ...
Luna ကတော့ သူတို့အဖွဲ့ရဲ့ ပျော်ရွှင်စရာအချိန်လေးတွေကို ပြန်လွမ်းနေပုံပါပဲ!! လွန်ခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းမှာပဲ Luna ဟာ သူမရဲ့ Instagram မှာ f(x) အဖွဲ့ရဲ့ 2nd mini album ‘Electric Shock’ ထွက်တုန်းကအဖွဲ့လိုက်ရိုက်ခဲ့တဲ့ပုံလေးကို တင်ခဲ့ပါတယ်။ “ငါတို့တွေအတူဆိုးခဲ့တဲ့ကာလတွေက အရမ်းကိုပျော်စရာကောင်းခဲ့တယ်” ဆိုတဲ့ caption နဲ့ တင်ခဲ့ပြီး ...
(၁၉၈၁)ခုနှစ်မှာ မွေးဖွားခဲ့တဲ့ ကိုရီးယားရဲ့ဒိတ်ဒိတ်ကြဲမင်းသမီးအချို့ကတော့ လာမယ့် ၂၀၂၁ မှာ အသက် ၄၀ ပြည့်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်နုပျိုမှုတွေကြောင့်သာ ပရိတ်သတ်တွေက အသက် ၃၀ ကျော်ရုံလောက်ပဲရှိသေးတယ်ထင်နေကြတာပါ။ တကယ်တော့ အသက် ၄၀ ပြည့်ကြတော့မယ့်သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ရဲ့ငယ်ရွယ်နုပျိုမှုတွေကတော့ တကယ့်ကိုမယုံနိုင်စရာပါပဲ။ 1.Han Yeseul 2.Han Hyejin ...
True Beauty ဟာ ၂၀၂၀ ဒီဇင်ဘာ ၉ ရက်နေ့မှာမှာစတင်ထုတ်လွှင့်ခဲ့တာဖြစ်ပေမယ့်လူကြိုက်များတဲ့ Webtoon ဇာတ်လမ်းတစ်ခုကိုပြန်လည်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်တာကြောင့် သရုပ်ဆောင်ရွေးချယ်မှုစတင်ကတည်းက အထူးအာရုံစိုက်ခံရတဲ့ ဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းမှာပါဝင်မယ့် သရုပ်ဆောင်တွေကိုရွေးချယ်ခဲ့စဉ်ကတော့တချိုု့ သရုပ်ဆောင်တွေဟာ သူတို့ မှန်းထားတဲ့သရုပ်ဆောင်တွေမဟုတ်ခဲ့ကြလို့ ဇာတ်လမ်းထွက်လာမှဝေဖန် စောင့်ကြည်မယ်ဆိုသူတွေလည်းရှိခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမယ့် တကယ်ထုတ်လွှင့်လာတဲ့အခါမှာတော့ အားလုံးအံ့အားသင့်ခဲ့ရတာကWebtoonနဲ့တစ်ပုံစံတည်းမတူပဲ အနည်းငယ်ပြောင်းလဲထားတဲ့ ဇာတ်ကွက်အသစ်များနဲ့မတူညီတဲ့ Character Development ...
လက်ရှိမြန်မာပရိတ်သတ်တွေ ကြားမှာ စိတ်ဝင်စားမှုအမြင့်ဆုံးကိုရောက်ရှိနေတဲ့ သတင်းတစ်ခုကတော့ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ ထိပ်တန်းအနုပညာရှင်တစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ စိုင်းစိုင်းခမ်းလှိုင်ရဲ့သီချင်းသစ် “Red Light” ဟာ 2NE1 ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တစ်ယောက်နဲ့ Music Collaboration လုပ်မယ်ဆိုတာပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနေ့မှာတော့ စိုင်းစိုင်းနဲ့ collaboration လုပ်မယ့် 2NE1 အဖွဲ့ဝင်တွေထဲက ဘယ်သူလဲဆိုတာကို အတည်ပြုကြေငြာလိုက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့ 2NE1 ရဲ့ Main ...